Xasan Sheekh Maxamuud: “Inaan Joogo Jeclaayaa dalkaan dani uguma jirto” – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Dec 5, 2019
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal ka soo saaray Sharciga doorashooyinka Qaranka oo maalmahaan ay dood adag ka leeyihiin xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka, isaga oo walaac ka muujiyey nuuca doorasho ee ka dhici doonta dalka.
Qoraalka Xasan sheekh oo dheer ayuu ku sheegay in madaxda dalka ay wadaan qorsho sababi kara muddo kororsi ay sameeyaan,waxaana uu sheegay in dalka,iyada oo duruufo intaan ka daran ay jireen ay ka dhaceen doorashooyin waqtiyo kala duwan oo uu mid-mid u dul istaagay.
Halkan hoos ka akhriso qoraalka ka soo baxay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxda hay’adaha dastuuriga ah iyo golayaashaba waxaa looga fadhiyaa oo laga wada sugayaa doorasho ku dhacda waqtigeedii.
INAAN JOOGO JECLAAYAA DALKAAN DANI UGUMA JIRTO.
Kenya oo Kismaayo ku soo rogtay amarro dhanka duullimaadka ah
Xisbiga Wadajir: ‘Waxaan canbaareynaynaa tallaabada ay DF ku dhiira galinayso falka iyo fatwada argagixisada’